27 Responses to “ငယ်သော်ငြားလည်း”
င်္ဘန်ဇိုင်းပင်လေးတွေက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာနော်။ ပြီးတော့ အများကြီးပဲ..။ အခုလို စုစုစည်းစည်းတင်ပြပေးတာ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်တာပဲ။ ပန်းတွေကို မြင်ရတာ စိတ်အေးချမ်းတယ်..။ဂျပန်မှာ ပန်းပြပွဲတွေကို တကူးတက သွားကြည့်ဖြစ်တဲ့အခါ ဘွန်းဇိုင်းပင်တွေကို သဘောကျလို့ မဆုံးဘူး။ သူတို့က ဘယ်လောက်ပန်းကြိုက်လဲဆိုရင် စားသောက်ဆိုင်တောင်မှ စားပွဲပေါ်မှာ ဘွန်းဇိုင်းပင်လေး တင်ထားတတ်သေးတာ။
May 8, 2010 at 11:32 PM
သေသေချာချာ ဇန် ဝင် စား ပြီးမှာ အရိပ် တကြည့် ကြည့် နဲ့ဖော် ကြူး ရတဲ့အနု ပညာ
တရပ် လို့မြင်မိပါတယ် ။ အနု ပညာ တိုင်းမှာ ကိုယ်ထားမိတဲ့စေတနာ နက်နဲ လာ တာနဲ့ အမျှ
ဝေမျှ ခံစား မိရသူ ဟာလဲ ဖန်တီး ရှင် ထက်တောင် ဆ ပွား ခံစား ဖော်ထုပ် သွား နိူင် တာ
တွေ လဲ ရှိနေ တတ်တာပါပဲ။
အော်... အနု ပညာ ဆိုတာ ကိုယ်က အရင် ခံစား ရ တာကိုး ..... ။
ဥယျာဉ်မှူးရဲ့ စေတနာ ရယ် ၊ ဝါသနာ ရယ် ကြောင့် ဒီလို လှပတဲ့ အနုပညာဆန်ဆန် လက်ရာလေးတွေ ဖြစ်ထွန်း လာတာပေါ့ နော် ။
ဂျပန်တွေ တော်ချက်က သူများ ယဉ်ကျေးမှု ကို သူတို့ယဉ်ကျေးမှု လို ယူဆောင် ဆင့်ပွား ပေးတတ်ကြတာ ပဲ ။
မြန်မာတွေ တော်ချက်က ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု၊သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေ ကို သူများတွေဆီရောက်စေပြီး ၊ ဆုံးရှုံးစေတတ်တာပဲ ။
လှလှပပ ဘွန်ဆိုင်းပင်လေးတွေကို ကြည့် ပြီး ၊ မလှမပ အတွေးတွေ .. ဝင်သွားသေးတယ် ချောရေ .. တတ်နိုင်ဘူး ....း(
ဗဟုသုတပါပဲဗျာ . .
ကျနော်က တော်တော် စိတ်ဝင်စားဖူးတယ်။ စိုက်လည်း စိုက်ဖူးတယ်။
မိုက်တယ်ဗျာ . .. သဘောကျတယ် . .
အတော် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အပင်လေးတွေပဲ
အပင်သေးသေးလေးတွေ အများကြီးကို တထိုင်တည်း ကြည့်ခွင့်ရလို့....
May 9, 2010 at 6:38 AM
ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထိပ်က ခြံကြီးမှာ စီးပွားဖြစ် စိုက်ရောင်းတာ ဝင်ကြည့်ဖူးတယ်
ပုံထဲက လက်ရာတွေကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ အရင်က ဘွန်ဇိုင်းဆိုတာ ဂျပန်က စတယ်
ထင်ထားတာ ။ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့လေ အဲဒီအပင်လေးတွေ လိုချင်သွားမိတယ်။
သိပ် အနုပညာဆန်တာပဲ။ အချက်အလက်တွေရော ပုံတွေရော သေသေချာချာ ရှာဖွေပေးထားလို့ ကြည့်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူးပါအစ်မရေ
ညီမလေးလည်း ဘွန်ဇိုင်းကို ဂျပန်ကစတယ်ပဲထင်ခဲ့တာ... လှလိုက်တဲ့ပုံလေးတွေ တကယ်သဘောကျတယ်...ကျေးဇူးစ် မမ :)
သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဘွန်ဇိုင်းပင်လေးတွေပဲ ...
လှတယ်ဗျာ .. အပင်လေးတွေက ...း)
အနီရောင် ဘွန်ဇိုင်းပင်လေး လိုချင်လိုက်တာ..။
စတွေ့တော့ အတုလို့တောင်ထင်တာာ ..:)
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဘွန်ဇိုင်းပန်းပင်လေးတွေ တွေ့ခွင့်ရလို့
ညီမက ဘွန်ဇိုင်းပင်လေးတွေကို အရမ်းသဘောကျတာ။ ကိုယ်တိုင်စိုက်ပေမယ့် စနစ်တကျ မပြုစုတတ်တာ ကြောင့်သေသွားတယ်။ အစ်မ ရှာဖွေပေးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို သိပ်သဘောကျတာပဲ။ မြင်လိုက်ရတာနဲ့ ကြည်နူးသွားတယ်။
ဘကျောက်တို့က လူကို ဘွန်ဇိုင်းလူ (လူပု)ဖြစ်အောင်လုပ်နေပြန်ပါပြီ...
ဗဟုသုတတွေလက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ မချောကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်...
ဘွန်ဇိုင်းပင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးအရမ်းသဘောကျတယ်။ ဗဟုသုတလည်းရပြီး အပင်လေးတွေအများကြီး
ဘွန်ဇိုင်းပင် စိုက်နည်းလေးများရှိရင် မျှပါအုံး ကျေးဇူး
ခုလို မျှဝေပေးတာ ဗဟုတုတ အများကြီးရတယ် မမချောရေ..
သိခွင့်ရလိုက်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမ..:)
တပင်လောက် ရချင်တား))
ဘွန်ဇိုင်းပင်တွေ အကုန်မသွားတယ်နော်...ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကဘွန်ဇိုင်း ခရေဇီလေ
မမချောရေ... ဘွန်ဇိုင်းပင်တွေ အကြောင်းပါ တလက်စတည်း ဖတ်သွားပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
SPECIAL CREDIT TO U :)
Thanks with noted for your sharing.
ဘွန်းဇိုင်းပင် စိုက်ပျိုးတဲ့နည်းပညာလေးပါဖြစ်နိုင် ရင် တင် ပေးပါလားအစ်မ:)